Mogadishu Journal » Wafdigii dowladda uga qeyb-gallay wada hadaladii Addis Ababa oo dib ugu laabtay magaalada Muqdisho
Mjournal : — Waxaa dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ergadii dowladda Soomaaliya uga qeyb-gashay wada hadalladii mudada dheer qaatay ee magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya ku dhaxmaray dowladda federaalka Soomaaliyo iyo maamulka Jubba.
Wasiirru-dowlaha madaxtooyada xukuumada Soomaaliya Faarax Sheekh C/qaadir oo dhinaca dowladda u saxiixay hishiiska, islamarkaana wafdiga hogaaminayay ayaa warbaahinta kula hadllay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Waxaa uu sheegay waxaa uu sheegay in hishiiskaasi ahaa mid wax ku ool ah oo la oran karo waa uu bilow fiican u ahaa qorshaha dib-u-hishiisinta iyo xiriirka dowladda dhexe iyo maamulada ka jira gobollada dalka Soomaaliya, isaga oo intaa ku darray in wada hadallada Addis Ababa ahaayeen kuwo soo afjaray khilaaf in mudo ahba oo jiitamayay oo u dhaxeeyay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland.
Waxaa uu siweyn uga soo horjeestay islamarkaana uu meesha ka saaray waasiiru-dowlaha madaxtooyada Faarax C/qaadir in ay jiraan beello iska soo horjeeda oo ku wada dhaqan gobollada Jubbooyinka, isaga oo sheegay in beellaha gobolladaas dega yihiin dad walaalo ah wixii khilaaf siyaasadeed ah ee jirana wada hadal lagu dhameysan doono.
Waxaa uu ugu danbeytii sheegay in maalmaha soo socda shirar daba jooga kan Addis Ababa lagu kala qaban doono magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayoo kuwaas oo lagu dardargelinayo wadahadalada u dhexeeya Dowladda Soomaaliya iyo maamulka Jubba.